ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် စကင်ဒေဗီးယန်းဒေသမှ အေးချမ်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြသူ ဒိန်းမတ်လူမျိုး 5.5 millions နေထိုင်ကြပါသည်။ မြန်မာဒုက္ခသည်များကို လက်ခံမည့်နိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂမှ ရှာဖွေသောအခါ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက အမေရိကား၊ သြစတြေလျှားတို့ပြီးလျှင် အများဆုံး
Read more: ဒိန်းမတ်မှ မြန်မာများ သက်သေခံချက်
Youtube Video: MCAthailand.com နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁း၃၀ အချိန်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ မြန်မာအသင်းတော် KLBC ဘုရားကျောင်း ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆိုတော်များ၊ ဂီတသမားမျာ လာရောက်သီဆို၊ ချီးမွမ်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆုန်သင်းပါရ်၊ စံပီး၊ N. ကိုင်ရာ တို့နှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆရာစိုင်းအေး၊ မြန်မာပြည်မှ ဆရာမနန်းသီတာအောင်တို့လည်း လာရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ KLBC မြန်မာအသင်းတော်မှ သိက္ခာတော်ရ မြန်မာဆရာမ (Dr. Wendy) နှင့် အသင်းတော်မှ အားလုံးသော မိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ကြားထားပါသည်။
Read more: ဘုန်းတော်ထင်ရှားရန်သော့ချက် -...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကရင်လူမျိုးများစွာ .. ချင်းမိုင်တွင်ရှိပါသည်။ ထိုကရင်လူမျိုးများသည်လည်း ရောက်ရာအရပ်တွင် ဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ကာ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြပါသည်။ ၂၀၁၁ခု နှစ်ဆန်းတွင် အပြီးသတ်မည်ဟု မှန်းထားသော ကရင်အသင်းတော်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန် ခြောက်မိနစ်လောက် ပေးနိုင်ရင် ဒါလေးကို အစအဆုံးကြည့်ပေးပါ..ကရုဏာစိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်
ခြောက်မိနစ်က တန် ပါတယ်..စားစရာ သောက်စရာတွေ အလျှံပယ် ထားစရာ နေရာမရှိအောင် ရေခဲသေတ္တာတွေ ပြည့်လျှံနေလို့ ခေါင်းကိုက်တဲ့လူတွေအတွက်..
Read more: ကြက်ကြော်.. စားချင်သလား..တဲ့
OFF THE BEATEN PATH မြန်မာပြည် ပုဂံ၊အင်းလေး အကြောင်းမှတ်တမ်း ၂၀၀၈
ANDREW AND KATLIJN
မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားစွာ သွားရောက်လည်ပတ်သူ အများကြီးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က လေယာဉ်နဲ့ မွေးရပ်ဌာနေ မြစ်ကြီးနားမြို့ကို သွားတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆွီဒင်လူမျိုး ၂၀လောက် နဲ့ အမေရိကန် ဇနီးမောင်နှံ ၂ယောက် တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆွီဒင်လူမျိုးအုပ်စုကတော့ ပူတာအိုထိ လေယာဉ်ဆက်စီးမယ်၊ ကချင်တောင်တန်းတွေမှာ ၂ပတ် နေမယ်၊ ပြီးတော့ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတောင်တန်းတွေမှာ တစ်လ နေကြမယ် .. ပြောတယ်။ အမေရိကန်ဇနီးမောင်နှံကတော့ မြစ်ကြီးနား ၀ိုင်အမ်စီအေ YMCA တည်းခိုခန်း ဘယ်လိုသွားရသလဲ.. မေးတယ်။ ကျွန်တော့ကိုလာကြိုတဲ့ ကားနဲ့ လေဆိပ်ကနေ ၀ိုင်အင်မ်စီအေ တည်းခိုခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူလည်း ၂ပတ်လောက် ကြာမယ်ပြောတယ်။ အားလုံးလက်ထဲမှာ Lonely Planet "MYANMAR" စာအုပ်ကလေးတွေ ကိုင်ထားကြပါတယ်။
A small mound of Burmese shrimp chips, smelly fish snacks, and beer cans wobbled precariously down the center of the isle in cadence with the dangerous back and forth lurching of our Burmese train carriage. The packaged food mound rolled overadense crowd of old crones sitting limply on the floor, all their bodies moving together side-to-side against the adjacent seat cushions inakind of sea-sick narrow-gauge train rave. The mound stopped beside Katlijn's bobbing sleeping head. Astonishingly,asmiling face popped out from behind the plastic baggies of red chili sauce and through the thick stench of dried prawn flakes.
Every crone in the train rave swiveled their heads inasingle group motion at the former lump of smoked sea goodies, its shell of dodgy snack bags blown clear away revealing only its skeleton:aspindly Burmese kid with two thin outstretched arms holding the twisted remains ofacouple of old plastic bottles- their entire contents had exploded forth on top of Katlijn.
Read more: OFF THE BEATEN PATH မြန်မာပြည် ပုဂံ၊အင်းလေး...
အမေရိကားရောက် မြန်မာများအတွက် ဆရာဇော်သူလင်းဒေသနာ
Fw: photographer..! ဓါတ်ပုံဆရာဆိုတာ...
Four Seasons And The Changes.....!!!